Astronomical clock: ihe ọ bụ, njirimara, ọrụ na ịmata | Netwọk Mgbasa Ozi
El kpakpando nke obodo bu otu n'ime ihe ndi njem nleta kachasi nma ebe obu na o nwere otutu akuko na oru. Dịka ọmụmaatụ, maka ndị ọbịa na Prague, klọọkụ mbara igwe bụ otu n'ime ebe ndị a kacha eleta. N’ime akụkọ ndị a na-akọ, e nwere ụfọdụ ịtụnanya.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị akụkọ ihe mere eme na njirimara niile nke mbara igwe.
1 Igwe mbara igwe nke nwere ike igosipụta oge
2 Ikike nke mbara igwe
3 Fọdụ ịmata ihe
Igwe mbara igwe nke nwere ike igosipụta oge
Akụkọ ihe mere eme nke oge mbara igwe Prague nwere ọtụtụ nkọwa dị oke egwu. Ọmụmaatụ, otu n'ime ha bụ na ha ruru nna ukwu onye wuru kwuru klọọkụ ka ọ ghara ike ọzọ dị ka nke ahụ. Enwere ndị kwenyere na ọ bụ amulet nke na-echekwa ụmụ amaala niile nchekwa kpamkpam. Ka teknụzụ na-aga n’ihu na a na-achọpụta eziokwu banyere ụfọdụ akụkọ ifo nke akụkọ ntolite, anyị na-ahapụ akụkọ ndị a ka anyị lekwasị anya n’otú ha si arụ ọrụ. Ka afọ na-agafe, iberibe elekere mbara igwe na-adọrọ mmasị maka onye ọ bụla hụrụ usoro sistemu analog.
Ọ bụkwa na ọ bụ elekere nwere ike igosipụta oge n'ọtụtụ ụzọ. Ihe a haziri bụ nke a astrolabe na mejupụtara 3 Kwadobe nke nwere ike akara oge 5 n'otu oge. Ọ bụrụ na anyị elee anya n’elu, anyị ga-ahụ ebe a na-ahụ maka ihe nkiri na-eme ka apị apịaji dị n’agbata ìsì abụọ ka a dọtara ndịozi iri na abụọ ahụ. Onye ọ bụla n’ime ha na-ahapụ nkeji iri isii ọ bụla iji gosi oge ọ bụ. Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ dị ọhụrụ karịa elekere, ọ bụ ezie na ha sitere na narị afọ nke XNUMX. Nke a pụtara na e webatara ọnụ ọgụgụ ahụ ka e kesịrị ha.
Na okpuru ya anyi nwere kalenda nke nwere ihe osise nke onwa na oge. Ọzọkwa, gosipụta Onye Nsọ nke ụbọchị ọ bụla n'afọ. Otu abụọ a nwere mmasị na nka nke na-adọta ọtụtụ puku ndị njem na Prague kwa afọ. Ọla elekere a bụ etiti etiti ebe ọ bụ na ọ bụ ibe nke emebere na 1410.
Ikike nke mbara igwe
Ma ọ bụ na elekere a dị egwu dị ka ọ nwere ike ịkọwa oge ahụ n'ụzọ ise dị iche iche. Usoro ya bu ihe omuma. Anyị ga-akọwa nke ọ bụla n'ime ha. N'otu aka, anyị nwere anyanwụ ọla edo na-agagharị gburugburu zodiacal. Mpempe akwụkwọ a nwere ike igosi anyị awa atọ n’otu oge. Ihe ngosi mbu bu onodu nke aka ọla edo. Ọ dị na ọnụọgụ ndị Rom ma gwa anyị oge na Prague. Mgbe aka gafere eriri ọla edo ọ na-egosi oge n'ụdị oge ndị ahaghị. N'ikpeazụ, mgbe ha na-agafe mgbanaka mpụta, ha na-ede akara awa mgbe ọwụwa anyanwụ dịka oge Bohemian si dị.
Otu ikike nke igwe kpakpando bụ igosi oge dị n'etiti ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. E kewara usoro a iji gosipụta oge a ka ọ bụrụ 12 "awa". Iji mee nke a, jiri ohere dị n’etiti anyanwụ na etiti etiti okirikiri ahụ. Buru n'uche na nha nke a na-agbanwe n'ime afọ, ebe ọ bụ na ọ bụghị ụbọchị niile bụ otu ogologo. Ka anyị na-abịaru nso n’oge ọkọchị, ụbọchị na-adị ogologo ma oge dị n’etiti ọwụwa na mgbe anyanwụ dara na-aka elu. Kama nke ahụ, mgbe anyị nọ n'oge oyi, anyị nwere ogologo pere mpe n'etiti ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ.
Nke atọ, n'ọnụ ọnụ elekere mbara igwe na-egosi nọmba ndị e ji ọlaedo dee n'ụdị Schwabacher. Nọmba ndị a na-ahụ maka igosi ọrụ dị ka emere na Bohemia wee bido akara site na 1 na mgbede. Ka o wee kwekọọ n'oge anyanwụ, mgbanaka na-agagharị n'afọ niile ka e wee tụọ ya n'ụzọ ziri ezi karị.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere mgbaaka zodiac. Obu ya na achoputa ebe uwa di na ecliptic. Ihe kacha jiri chi ahụ anya bụ ihe ọzọ ụwa jikọtara gburugburu anyanwụ. Ọ bụ ahịrị ka usoro ntụgharị asụsụ ụwa dị. A kọwara usoro nke zodiacal ring dị ka ihe ndabere nke ụgbọ elu elliptical. Ihe a na-ahụkarị na elekere igwe ọ bụla. Mgbagharị ahụ dabere na diski na-akpali mgbanaka zodiacal.
Usoro nke mgbanaka a bụ n'ihi iji ihe nchebe nke stereographic ụgbọelu ecliptic. Ejiri North Pole dị ka ihe ndabere nke ụgbọ elu a. O nwere ike iyi ka ọ bụ akụkụ ọhụụ, mana ọ bụ ndokwa dị n'ọtụtụ elekere mbara igwe. N'ikpeazụ, otu n'ime ọchịchọ ịmata ihe bụ nke ahụ e nwere amị n'ọnwa na-egosi anyị usoro nke satịlaịtị anyị. Mmeghari ebe a yikwara elekere mbu ma oso oso. Imirikiti ndị ama ama na elekere mbara igwe na-enweta mmeri dị na etiti ahụ.
Ọzọ ịmata bụ na ọ na-emi esịnede a anyịnya discs na center na ọtụtụ n'usoro discs na-arụ ọrụ kpamkpam onwe ha. Dị ka nchịkọta, anyị na-ahụ na o nwere mgbanaka zodiacal na mpụta mpụta nke e ji mkpụrụ edemede Schwabacher dee. O nwekwara agịga atọ: otu n’ime ha bụ aka, aka nke abụọ bụ anyanwụ nke na-agagharị na ya site na elu ruo na nke atọ bụ akara kpakpando nke ejikọtara na mgbanaka zodiacal.
Taa ọ nwere ike ịbụ usoro dị mfe n 'ọ dị n'ile anya, mana n'oge ya ọ bụ ihe ngosi nka na ụzụ. Anyị na-ekwu na e wuru mpempe akwụkwọ mbụ n'afọ 1410 ma ọ nweghị ihe ọzọ iji tụnyere teknụzụ nke oge ahụ na nke ugbu a. Okwesiri ighota na sistemụ igwe na-adịghị nwayọ nwayọ nke na ọ gaghị ekwe omume ịghọta mmegharị ahụ na anya mmadụ n'oge. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ngagharị nke elekere mbara igwe anyị ga-edekọ ma nwee ọganihu. Enwekwara ụfọdụ kọmputa kọmputa ebe anyị nwere ike ịnwale ule dị iche iche iji hụ ka ọ si agagharị na otu o si arụ ọrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere elekere astronomical Prague na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Igwe kpakpando
Ugwu kasị elu n'ụwa